I-Pumice bubunzima obulula kakhulu, i-porous kunye ne-abrasive kwaye isetyenziswe iinkulungwane kushishino lokwakha kunye nobuhle kunye namayeza okuqala.
Ikwasetyenziswa njenge-abrasive, ngakumbi kwiipolisi, ii-erasers zepensile, kunye nokuveliswa kwee-jeans ezihlanjwe ngamatye. I-Pumice yayisetyenziswa kwishishini lokuqala lokwenza iincwadi ukulungisa iphepha lesikhumba kunye nokubopha ngesikhumba.
Ilitye lePumice lezoLimo
Ilitye lePumice liyinto enkulu enokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zezityalo. Inokufunxa amanzi okanye isichumiso ixesha elide. Oku kunokugcina isityalo sakho sikwimeko efanelekileyo yokufuma ngaphandle kokunkcenkceshela rhoqo. Ilitye lePumice linobomi obude xa kuthelekiswa nolunye uhlobo lwezinto zezolimo. Ungasebenzisa ilitye lepumice endaweni yomhlaba xa utyala. Oku kuya kunceda ukunciphisa izinambuzane kunye nezitshabalalisi. Ilitye lePumice lineeminerali ezininzi ezinokunceda isityalo sakho ukuba sikhule sibe sihle kwaye sisempilweni.
Izikhokelo: Ngaphambi kokusetyenziswa, umsebenzisi kufuneka afake ilitye lepumice emanzini. Emva kwaloo msebenzisi unokubeka amatye ngaphantsi kodongwe, axutywe nomhlaba, okanye asebenzise ilitye lepumice kuphela xa etyala njengesiqhelo. Nangona elo litye le-pumice linokugcina ukufuma ixesha elide. Usafuna ukunkcenkceshela isityalo sakho rhoqo. Unokuqaphela kumbala welitye lepumice. Ukuba iyoma okanye umbala wayo uba mhlophe ngakumbi, kuyacetyiswa ukuba usinkcenkceshele isityalo sakho.
Izimbiwa kwiPumice Stone
Ilitye lePumice lenziwe kwilitye elityhidiweyo phantsi komhlaba okanye njengoko sibiza ngokuba “i-lava”. Olu daka lunamatye anyibilikayo kunye neeminerali ezingaphantsi komhlaba. Ilitye le-Pumice lineeminerali ezininzi kunye ne-elementi njengoko kubonisiwe kwitheyibhile engezantsi.
IManganese lilungu elifunekayo kwii-enzyme ezininzi. Ezi enzyme zibizwa ngokuba yi “gastric juice”. Ukuba akukho, umbindi wamagqabi okanye umbindi womthi unokuba namanxeba.
Icalcium yinxalenye ebalulekileyo yesakhiwo seseli kwaye inceda iiseli zesityalo zisebenze ngokuqhelekileyo.
Iinzuzo okanye i-calcium kwiPumice
Icalcium iya komeleza imibhobho yamanzi kunye nombhobho wokutya wezityalo. Oku kwandisa ukusebenza kakuhle kwamanzi kunye nokuhanjiswa kokutya kwiindawo ezahlukeneyo zesityalo.
I-calcium yinxalenye ebalulekileyo yokuveliswa kwehomoni eqhelekileyo, njengamahomoni, i-cytokines, enceda ukuqinisa iintyatyambo. Ukuba isityalo sinqongophele kwi-calcium, ihomoni yesityalo nayo iya kunciphisa kwaye ibangele ukuqhakaza kwentyatyambo ephantsi kunye nokukhula okucothayo kwezityalo.
Icalcium yakha inkqubo yeengcambu eyomeleleyo efunxa amanzi ngcono. Ukuba ukunqongophala kwe-calcium, inkqubo yeengcambu iyancipha. Iingcambu zeengcambu zinokuqhekeka ngokulula kwaye izifo zomhlaba ziya kungena lula kwiingcambu.
Icalcium inceda isixokelelwano seengcambu ukuba sixhathise umhlaba onetyuwa.
Icalcium inceda izityalo ukuba ziqokelele iinitrate ngaphakathi kuyo. Oku kunceda ukuba isityalo sikhule ngcono ngakumbi kwixesha apho izityalo zifuna i-nitrate ephezulu. Inkqubo yengcambu yesityalo ayiyi kukhula kwaye ifutshane, ukuba i-calcium iswele. Xa ukhula iingcambu ezintsha, isityalo siya kufuna i-calcium ephezulu.
Ilitye lePumice leSubstrate yesihluzi
Ilitye le-Pumice yindawo entsha enokuthi isetyenziswe endaweni ye-coral reef. Inenkangeleko ye sponji kodwa yomelele. Ilitye alinakwaphuka njenge-coral reef kwaye linobomi obude. Ilitye lePumice linobunzima obulula kwaye kulula ukulicoca. Inokukunceda ukulawula i-PH yamanzi, nokuba amanzi ane-PH ephezulu okanye ephantsi, ilitye le-pumice liya kulawula i-PH yamanzi ukuba ibe malunga ne-7.0. Oku kuya kugcina amanzi esemgangathweni kwaye kubangele impilo engcono kwiintlanzi zakho ezizithandayo.
Izalathiso: Ngenxa yobunzima bayo, umsebenzisi kufuneka afake ilitye lepumice emanzini malunga nobusuku obunye ngaphambi kokusetyenziswa. Oku kuya kwenza ukuba ilitye likwazi ukutshona kwindawo yokucoca echibini. Ukuba ufuna ukulisebenzisa ngokungxamisekileyo, unokubeka into phezu kwelitye ukuze likwazi ukutshona. Emva kwexeshana amatye aya kutsala amanzi aneleyo ukuze akwazi ukutshona. Ukuze ucoce ilitye lepumice, umsebenzisi kufuneka alicoce ngamanzi kodwa angalomisi ngokukhanya kwelanga. Ubushushu buya kubulala zonke ii-microorganisms ezinceda ukucoca inkunkuma yeentlanzi.
Ilitye lePumice Lokuhlanjwa kwempahla
Ilitye lepumice sisixhobo esivumelana nokusingqongileyo sokuhlamba idenim okanye ukuhlamba impahla. Xa uhlamba ngelitye le-pumice, Inokudala iphethini ekhethekileyo kwi-denim.
I-Pumice isetyenziswa ngokubanzi ukwenza ikhonkrithi ekhaphukhaphu kunye neebhloko ze-cinder zokuxinana ezisezantsi.
Umoya ogcwele i-vesicles kweli litye elineemingxuma lisebenza njengesigqubuthelo esilungileyo.
Ipumice ecolekileyo ebizwa ngokuba yipozzolan isetyenziswa njengesongezo kwisamente kwaye ixutywa nekalika ukwenza ikhonkrithi enobunzima obulula, egudileyo, efana nesamente.
Olu hlobo lwekhonkrithi lwalusetyenziswa kude kudala ngamaxesha amaRoma.
Iinjineli zaseRoma zayisebenzisa ukwakha idome enkulu yePantheon ngezixa ezikhulu zepumice ezongeziweyo kwikhonkrithi kwindawo ephezulu yesakhiwo.
Kwakhona yayisetyenziswa ngokuqhelekileyo njengemathiriyeli yokwakha kwimisele emininzi yamanzi.
Enye yezinto eziphambili zokusetyenziswa kwepumice ngoku eMelika kukwenza ikhonkrithi.
Eli litye lisetyenziswe kwimixube yekhonkrithi kangangamawaka eminyaka kwaye lisaqhubeka lisetyenziswa ekuveliseni ikhonkrithi, ngakumbi kwimimandla ekufutshane nalapho kubekwa khona le ntaba-mlilo.
Izifundo ezitsha zingqina ukusetyenziswa okubanzi kwepumice powder kwishishini lekhonkrithi.
I-Pumice inokusebenza njenge-cementitious material kwikhonkrithi kwaye abaphandi babonise ukuba ikhonkrithi eyenziwe nge-50% yepumice powder inokuphucula ngokubonakalayo ukuqina kodwa inciphise ukukhutshwa kwegesi ye-greenhouse kunye nokusetyenziswa kwamafutha efosili.
I-Pumice yokhathalelo lomntu
Yinto enokuthi isetyenziswe kwifomu yomgubo okanye njengelitye lokususa iinwele ezingafunekiyo okanye ulusu.
Kwi-Egypt yakudala ukhathalelo kunye nobuhle babubalulekile kwaye izimonyo kunye nezinto zokuthambisa zazisetyenziswa kakhulu. Omnye umkhwa oqhelekileyo yayikukususa zonke iinwele emzimbeni kusetyenziswa iikhrimu, iincakuba kunye namatye epumice.
Ipumice ekwimo engumgubo yayisisithako kwintlama yamazinyo kwiRoma yamandulo.
Ukunyamekela izikhonkwane kwakubaluleke kakhulu kwiChina yamandulo; izikhonkwane zazigcinwa zilungiswe ngamatye epumice, yaye amatye epumice ayekwasetyenziselwa ukususa amanxeba.
Kwafunyaniswa kumbongo waseRoma ukuba ipumice yayisetyenziselwa ukususa ulusu olufileyo ukuya kutsho emva phayaa nge-100 BC, kwaye mhlawumbi ngaphambi koko.
Namhlanje, uninzi lwezi ndlela zisasetyenziswa; ipumice isetyenziswa kakhulu njengento yokukhupha ulusu. Nangona iindlela zokususa iinwele ziye zavela kwinkulungwane, izinto ezirhabaxa ezifana namatye epumice zisasetyenziswa.
“Amatye ePumice” ahlala esetyenziselwa kwii-salon zobuhle ngexesha lenkqubo ye-pedicure ukususa ulusu olomileyo kunye nolugqithisiweyo ukusuka phantsi kweenyawo kunye neefowuni.
Ipumice ecolekileyo yongezwa kwezinye iintlama zamazinyo njengepolishi, efana nokusetyenziswa kwamaRoma, kwaye isusa ngokulula i-plaque yamazinyo. Intlama yamazinyo enjalo iyingozi kakhulu ukuba ingasetyenziswa yonke imihla.
I-Pumice yongezwa kwizicoci zezandla ezinzima (ezifana nesepha yelava) njenge-abrasive epholileyo.
Ibha yelitye eliqinileyo lepumice
Ilitye le-Pumice, ngamanye amaxesha lifakwe kwi-handle, sisixhobo esisebenzayo sokuxubha ukukhupha i-limescale, i-rust, amakhonkco amanzi anzima, kunye namanye amabala kwi-porcelain fixtures kumakhaya (umzekelo, amagumbi okuhlambela).
Yindlela ekhawulezayo xa kuthelekiswa nezinye izinto ezifana neekhemikhali okanye iviniga kunye nesoda yokubhaka okanye iboraksi.
I-Pumice yeyeza lokuqala
I-Pumice isetyenziswe kumashishini amayeza iminyaka engaphezu kwama-2000. Amayeza amandulo aseTshayina asebenzisa ipumice yomhlaba kunye ne-mica yomhlaba kunye namathambo e-fossilized afakwe kwiti. Le iti yayisetyenziselwa ukunyanga isiyezi, isicaphucaphu, ukuphuthelwa, kunye nokuphazamiseka kokuxhalaba. Ukungeniswa kwala matye acoliweyo ngokwenene akwazi ukuthambisa amaqhuqhuva kwaye kamva asetyenziswa kunye nezinye izithako zemifuno ukunyanga umhlaza wenyongo kunye nobunzima bomchamo.
Kumayeza asentshona, ekuqaleni kwenkulungwane ye-18, ipumice yagutywa yadityaniswa neswekile kwaye nezinye izithako zazisetyenziselwa ukunyanga izilonda esikhumbeni nakwicornea.
Imixube efana nale yayikwasetyenziselwa ukunceda amanxeba amanxeba ngendlela esempilweni. Malunga ne-1680 kwaphawulwa yisazi sendalo saseNgesi ukuba ipumice powder yayisetyenziselwa ukukhuthaza ukuthimla.
Previous post: פּימס שטיין עקספּאָרטער